Gaari BL ah oo Qarax ku haleelay degaan ay ku dagaalameen Ciidamada Galmudug iyo Alshabaab - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Gaari BL ah oo Qarax ku haleelay degaan ay ku dagaalameen Ciidamada Galmudug iyo Alshabaab - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Gaari BL ah oo Qarax ku haleelay degaan ay ku dagaalameen Ciidamada Galmudug iyo Alshabaab
Wararka laga helayo Koonfurt Gobolka Mudug ayaa sheegaya inuu Qarax Miino uu haleelay Gaari BL ay oo marayay degaanada Koonfura Mudug oo ay dhowan ku dagaalameen ciidamada dowladda, kuwa Galmudug iyo Alshabaab.
Gaariga oo ahaa nooca Homey ayaa dardaray Miino la sheegay inay dhulka geliyeen Alshabaab, xilli uu marayey inta u dhaxeysa degaannada Qeycad iyo Bacaadweyne, waxaana ku dhintay dadkii la socday.
Wararka ayaa sheegaya inay Gaariga la socdeen 2 qof, ayna ku geeriyoodeen, waxaana halkaasi gaaray dadka degaanka oo sheegay in gaarigii uu ku bas beelay qaraxa.
Xaaladda degaanka Koonurta Mudug ayaa ah mid weli kacsan, markii dagaal culus uu toddobaadkan ku dhex maray Alshabaab iyo ciidamada dowladda.
Previous articleJubbaland oo War kasoo saartay sababta Garoonka Kismaayo looga celiyey la-taliyaha Farmaajo
Next articleKooxdii Dableyda ee Khaarijisay Madaxweynihii Haiti oo noqday Mareykan iyo Columbian (Daawo)